Tendrotany - Wikipedia
Ny tendrotany dia ny tampony roa, atsimo sy avaratra, amin' ny bolantany, tendron' ilay teza heverina fa ihodinan' ny tany.
1 Ireo tendrontany roa
1.1 Tendrontany avaratra
1.2 Tendrontany atsimo
2 Ny toetanin-tendrontany
Ireo tendrontany roaHanova
Ny tendrontany avaratra dia toerana ara-jeôgrafia any avaratra indrindra eto an-tany, any ampovoan' ny ranomasimbe Arktika. Eo anelanelan' ny -43 °C sy 0 °C ny hatsiaka any amin' ny tendrontany avaratra, izay no mampisy ny ranomandry lalandava any amin' ny tendrontany.
Ny tendrontany atsimo dia ny teboka farany atsimo indrindra eto amin' ny Tany. Ao amin' ny kôntinenta Antarktika no misy azy. Io no teboka ihaonan' ny laharan-jara hasina rehetra any atsimo indrindra.
Ny faritra misy ny toetanin-tendrontany dia eo anelanelan’ ny faribolan-tendrontany sy ny tendrontany. Tsy dia misy firy ny rotsak’ orana ary ny maripana dia ambany dia ambany, mahalana raha hihoatra ny 0 °C. Rakotra ranomandry mandrakariva ireo faritra ireo. Rakotra ranomandry i Arktika izay ahitana an’ i Goenlandy sy i Siberia any avaratra. Toraka izany koa i Antarktika any atsimo, izay efa nahitana hatsiaka mahatratra -88 °C. Mety mahatratra 3 000 m ny hatevin’ ny ranomandry amin’ izany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tendrotany&oldid=1041419"
Dernière modification le 10 Desambra 2021, à 16:12
Voaova farany tamin'ny 10 Desambra 2021 amin'ny 16:12 ity pejy ity.